Akụkọ - Nkọwapụta amụma kọfị na nyocha atụmanya mmepe
Ọfụma ahịa kọfị na nyocha amụma amụma mmepe
Kọfị bụ otu n'ime ihe ọ majorụveraụ atọ kacha mkpa n'ụwa. Ọ bụ ihe ọ madeụverageụ emere na kọfị a roara n'ọkụ. Ọ bụ isi ihe ọ popularụ popularụ na-ewu ewu na ụwa yana koko na tii. Site na mmụba nke ụkpụrụ ibi ndụ ndị anyị na mmụba na-aga n'ihu nke ịmara banyere kọfị kọfị.
“Ugboro abụọ iri na otu” ejị, online kọfị ahịa ihe mgbawa ibu
Site na Nọvemba 1 ruo nke 3, kọfị kọfị mụbara site na 1900% kwa afọ, na-ebute nri ọhụrụ. N'ime ha, ntị na-ekwo ekwo, mmiri kọfị, na kọfị kọfị mụbara karịa 5000%. Salesbọchị ahịa atọ agafeela afọ 11.11 nke afọ gara aga. Mgbe Nestlé nwetachara ahịa azụmaahịa ụbọchị mbụ nke 455% na Nọvemba 1, ahịa netwọkụ nke kọfị kọfị Nestlé n'oge ahụ sitere na Nọvemba 1 ruo 3 mụbara site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 400% kwa afọ; Ọrụ ire ahịa Starbucks nke Home Enwe Kofi mụbara site na 1 ruo 3 Nke a bụ oge 30 nke nke afọ abụọ nke afọ gara aga; akara ngosi kpakpando nwere Santon nwere iwu 220,000 na November 1st, na ire ubochi ato nke 80 nde site na November 1st rue 3rd bu ihe di ka okpukpu ato karia afo gara aga.
Ahịa kọfị na-akawanye mma na ịrị elu nke kọfị kọfị ọpụrụiche
E jiri ya tụnyere mba ndị ọzọ, omume ị coffeeụ kọfị nke China pere mpe karịa ngwaahịa tii, mana na mmelite nke ibi ndụ ndị anyị na mmata na-eto eto banyere kọfị, yana nnukwu uru igwe mmadụ, ọ na-akpali ị consumptionụ kọfị ụlọ. Ọnụ ọgụgụ ahịa na-aga n'ihu na-agbasa. Ihe data gosiri na n’afọ 2018, ihe ọ China'sụ coffeeụ kọfị nke China bụ iko 6.2, ahịa kọfị bụkwa yuan 56.9. A na-eme atụmatụ na ka ọ na-erule 2023, ihe ọ consumptionụ coffeeụ kọfị nke ọ bụla ga-abụ iko 10.8, ahịa kọfị ga-abụ RMB ijeri 180.6.
Ka ọ dị ugbu a, oriri nke kọfị kọfị ọhụrụ na kọfị mmekọrịta ọha na eze nke Starbucks na-anọchi anya ya na-enwewanye mmasị karịa ndị ahịa China karịa na nkwalite oriri. Na ahịa ndị kọfị ọhụrụ nke ndị kọfị kọfị, ụdị kọfị na ọrụ ndị ahịa na-agụnye: ụlọ ahịa kọfị na-abụghị nke kọfị, ị coffeeụ kọfị n'ụlọ ahịa nri, ị consumptionụ kọfị n'ụlọ ahịa ihe ọ beụverageụ, ụlọ ahịa kọfị dị mma, igwe kọfị ọrụ onwe onye, ​​wdg. kọfị kachasị ewu ewu na mba m na 2018 bụ kọfị ozugbo, ọnụọgụ ya nwere ike ịga n'ihu na-eto. Na 2018, kọfị kọfị nke obodo m ruru ihe dị ka 68% nke ahịa kọfị nke mba m, kọfị dị njikere ị drinkụ ihe dịka 10%, kọfị a na-amị amị ruru 18%.
Site na ịrị elu nke ngwa ngwa ngwa ngwa, KFC, Luckin, Costa, Yingji, Yuyan, Manner, CoffiiJoy na ụdị ndị ọzọ na-adịghị n'ịntanetị amalitela ịbanye Tmall, na-ebupụta ngwaahịa ngwa ngwa dị elu. Coffeedị kọfị na-ebuwanye ibu, na asọmpi ahịa na-akawanye njọ. Site na mmepe ngwa ngwa nke e-commerce, usoro ntanetị dị n'ịntanetị dị ka Tmall na apple apple WeChat apụtawo, ahịa kọfị n'ịntanetị abawanyewo.
Atụmanya mmepe nke ụlọ ọrụ kọfị
1. Ihe ọ consumptionụ consumptionụ kọfị na-agbanwe mgbe niile
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, site na mmepe mmepe na-aga n'ihu nke nnyefe nri na ụlọ ọrụ Internetntanetị, ndị na-eri ihe n'ụlọ na mba ofesi ejiri nwayọ gbanwere usoro oriri ha nke isi nri na kọfị. Nhọrọ onwe ha na nnyefe nri abụrụla ihe ọhụrụ maka ndị ahịa ịzụta kọfị. Ná ngwụsị nke afọ 2017, kọfị a na-akpọ Ruixing Coffee mepere ụdị azụmaahịa ọhụrụ nke usoro ịntanetị + na ntanetị na ntanetị. Na Septemba 2018, Starbucks kwalitere ọrụ nnyefe nri "Special Star Delivery" na China; n'October nke otu afọ ahụ, Mcafee malitekwara ọrụ nnyefe. Na Mee 2019, Starbucks weputara ọrụ "Brown Express" na China ebe enyere iwu na ntanetị ma bulie ha na ụlọ ahịa. Na Septemba 2020, a ga-etinye kabinet nri nke ndị na-eri nri ụtụtụ n'ime ọrụ ikpe, na ebe a na-a coffeeụ kọfị ga-adị iche ma nwee ike ibugharị.
2. manlọ ahịa na-enweghị isi nwere ike bụrụ ihe ọhụụ ọhụrụ maka ị consumptionụ kọfị
E jiri ya tụnyere ụlọ ahịa, ọnụ ọgụgụ ndị na-enweghị isi na-achọ ụgwọ dị mfe, anaghị egbochi ebe obibi, ma na-agbanwe agbanwe. Ya mere, ụlọ ahịa na-enweghị isi na-ewu ewu na China. Na Jenụwarị 8, 2020, Luckin Coffee kpughere igwe kọfị abụọ a na-ejighị n'aka kọfị "Rui Instant Buy" na igwe na-ere ahịa na-enweghị nchekwa "Rui Cost-irè", wee bupụta "atụmatụ mkpọsa ahịa a na-ejighị n'aka", na-eji Internetntanetị ọhụrụ nke China eme ihe n'ụzọ zuru ezu. nke akụrụngwa emeela ka ụlọ ọrụ na-ere ahịa na-adịghị mma iji kwalite ọzọ. N'ịbụ nke Luckin Kọfị kpaliri, mkpọsa mkpọsa na-adịghị mma nwere ike bụrụ ihe ọhụrụ ọhụụ kọfị.
3. Thetọ na ụdị kọfị na-eji nwayọ nwayọ
Ka ọ dị ugbu a, ndị isi na-ere ahịa kọfị nke China bụ ndị na-eto eto, ndị nwere obi ike iji nwaa ihe ọhụrụ. Ya mere, otu kọfị ihe ọ cannotụ cannotụ enweghị ike izute ha ogologo oge mkpa. Kọfị ụdị mkpa nọgidere innovate, ịme ọhụrụ, na-ezi ihe na-eke kọfị na ngwaahịa na pụrụ iche "n'ire ahịa" iji nọgidere "-akpali" ndị ahịa ọchịchọ ịzụta. Ka ahịa kọfị China na-aga n'ihu na-eto, a kwenyere na ọtụtụ kọfị ga-apụta na ahịa ahụ.
4. IP cafes na okike gburugburu nkukota mmepe
Site na mmụba nke ibi ndụ ndị mmadụ, ndị mmadụ enweghịzi afọ ojuju na ngwaahịa kọfị nkịtị, ma nwee ọtụtụ echiche ọhụụ banyere uto kọfị, dị ka kọfị kọfị, biya ihe ọ drinksụ coffeeụ kọfị biya, oyi kọfị oyibo oyi oyi kọfị na oyi na-agba nitrogen gas Kọfị na na; akpa anaghịzi ejedebe iko kọfị ọdịnala, karama mmanya na karama biya niile dị n'ọgbọ agha; ọtụtụ ngwaahịa dị iche iche agbajiala ókèala "kọfị" ọdịnala ma na-emewanyewanye agwakọta. Nkukota dị n'etiti kọfị na ihe ọ otherụveraụ ndị ọzọ gbara ya gburugburu, na-ebute ngwaahịa ndị dị ka tii kọfị na kọfị kọfị. N’afọ ndị na-adịbeghị anya, ihe ndị mmadụ chọrọ n’arọ na-esiwanye ike, na-eme ka ihe ndị nwere kọfị dị obere, nke na-enwe obere kalori, nke dị obere shuga, na nke nwere protein buru ibu.